आधुनिक कम्प्युटर मा प्रविधि हार्डवेयर प्रवेग सबैतिर प्रयोग गरिन्छ। यो सीपीयू MMX निर्देशन को एक विस्तार, रूपमा परिचित र प्राकृतिक भएको छ। तर यो सधैं थियो। पहिलो प्रयोगात्मक कदम विकासकर्ताहरूले र प्रोग्रामर नयाँ सुविधाहरू, कम्प्युटर समुदाय को एक मिश्रित मूल्यांकन, र त्यसपछि प्रवर्द्धन गर्न - पहिचान ... यो थियो। अब, हार्डवेयर प्रवेग लगभग हरेक उपकरण र कार्यक्रम मा उपस्थित छ। कहिलेकाहीं, यसलाई जहाँ र कुनै एक इच्छा खोज्छन्। तपाईं एक भिडियो कार्ड हार्डवेयर प्रवेग समर्थन गर्न चाहनुहुन्छ? कृपया! एक ध्वनि कार्ड? हो, प्रशस्त! ठीक छ, नेटवर्क कार्ड? र त्यो अफलोड गर्ने क्षमता छ को CPU डाटा प्याकेटहरू संग तालिका कामबाट!
हार्डवेयर प्रवेग व्यापक प्रक्रिया मल्टिमिडिया प्रवाहको लागि विभिन्न कार्यक्रम मा प्रयोग गरिन्छ। कारण यो यो एकदम खर्च समय कम गर्न सम्भव छ। सबैले ब्राउजर विकासकर्ताहरूले लामो आफ्नो उत्पादनहरु मा भिडियो कार्ड को आधारभूत कार्यहरु मार्फत हार्डवेयर प्रवेग प्रयोगको माध्यमबाट ग्राफिक्स (प्रतिपादन जटिल पृष्ठ) संग काम बढाउने मौका शामिल गरिएको छ थाह छ।
प्रवेग यो कस्तो? वास्तवमा, सबै सरल छ। कम्प्युटर उपकरण को सामान्य योजना अनुसार, सबै गणितीय गणना कार्य सीपीयू (सीपीयू)। त्यसैले, टोलीमा "2 + 2" मिसिन कोड रूपान्तरित छ कार्यक्रम को मात्रा गणना र प्रशोधनका लागि यो पठाए। तर प्रत्येक दोस्रो प्रोसेसर गणना को एक विशाल संख्या executes रूपमा, त्यसपछि एउटा नयाँ कार्य को साथै यसको प्रदर्शन अलिकति कम छ - कर्नेल लोड गरिएको छ। विकासकर्ता लामो वृद्धि सीपीयू शक्ति बिना गणना को गति बढाउन खोजे छन्, र ancillary हार्डवेयर क्षमताहरु को परिचय मौका दिइएको।
पहिले एक दशक को एक भिडियो कार्ड कल्पना गर्नुहोस्। यो एक तर्क र भिडियो स्मृति थियो। कुनै पनि जानकारी तरिका स्मृति कक्षहरूको एरे रेकर्ड तस्बिरहरू सम्बन्धित र संकेत परिवर्तन एक निश्चित तरिका मा "स्पष्ट" योजनाहरु अनुगमन।
छवि कुनै पनि परिवर्तन, पृष्ठभूमि रङ मा बिन्दु को पनि तुच्छ विस्थापन - को CPU को परिणाम। यो निर्देशांक अपेक्षा छ अफसेट र चक्र दोहोर्याइएको छ। बिन्दु एक, गणना बढ्छ को संख्या छैन भने। साथै, प्रोसेसर पहिले नै त्यहाँ "के" छ। परिणाम - सुस्त।
भिडियो कार्ड मा यो सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सीपीयू मुक्त स्रोतहरू अनुमति जो केवल ग्राफिक्स मा लगी भएको छ कि एक विशेष प्रोसेसर, राख्न थाले। यस्तै विधि ध्वनि लागि प्रयोग गरिएको छ - अडियो चिप सुविधाहरू बढाउने "सिकेका"; नेटवर्क - एडेप्टर यसपछी विशेष उद्देश्य प्रोसेसर पायो र।
असक्षम वा एप्लिकेसनमा हार्डवेयर प्रवेग सक्षम, तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ, तर केवल यदि यस्तो सुविधा प्रोग्रामर द्वारा प्रदान गरिएको छ। उदाहरणका लागि, निम्नानुसार Windows XP मा ग्राफिक्स प्रवेग व्यवस्थापन: तपाईं डेस्कटपमा सम्पत्ति कल र पालना बाटो "सेटिङ - विकसित - निदान" हुनुपर्छ। यो विन्डो तपाईं पूर्णतया वा आंशिक रूपमा अक्षम हार्डवेयर सम्पूर्ण प्रणाली को प्रवेग गर्न अनुमति दिन्छ मा स्लाइडर छ। कहिलेकाहीं यो अनुकूलता समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक छ।
स्क्रिन संकल्प कसरी वृद्धि गर्न, र सर्वोत्कृष्ट संकल्प संग एक उपकरण चयन
कसरी कम्प्युटरमा "windose 8" फ्लैश स्थापना गर्न?
विवाह फोटो वा संकेतक ज्याला
एक कारखाना रिसेट के हो
एलर्जी रोग - तपाईं तिनीहरूलाई पिटे गर्न सक्नुहुन्छ?
अर्को छ वर्ष मा, कार्यालय को आधा भन्दा बढी गायब हुनेछ?
होटल Vinpearl गोल्फ भूमि Resort विला5*, भियतनाम, Nha Trang फोटो र समीक्षा
एक स्कूटर, एक इन्जिन ले साइकिल, एक मोटरसाइकल कसरी पुरानो सवारी?
बम्पर आफ्नै हात मर्मत। केही सरल सिफारिसहरू